MCA's long day's journey into night by Commander (Rtd) S THAYAPARAN, formerly of the Royal Malaysian Navy
LKY: Socialism or Free Markets? Consider Myanmar and Thailand
TQ Ma Chaw Suu, Buddhist lady for the fair view on Myanmar Muslims
Revealed : Who Is Funding the Elections?
U Thein Sein considering Rohingya refugee camps or deportation
Be careful Radical Terrorist Rakhines and Bama Tatmadaw, this bad karma will follow you in sansara
I totally agree with former PM Tun Dr Mahathir Mohamad that most GLCs have strayed from its original objective, which is to help elevate the Bumiputera economic status in the country.
However, the government's investment arm Khazanah which is entrusted in managing the GLCs is also 'deviating' from its original aim in ensuring that the GLCs helps nurture more Bumiputera companies by allocating them with some contracts and jobs.
Some GLCs are open to business competition while the rest keep the door shut to competitors. While used to be part of Bumiputera equity, the GLCs today are entirely government owned and no longer give emphasis on multiplying Bumiputera participation in its core business.
Sad to say thataGLC like Telekom Malaysia is so afraid of competition that it has to 'kill'anew highly-potential Bumi company for the same industry by shooing it away and not even willing to take it up as the one to complement its effort in wiring up the nation.
"GLCs are holdings in trust and were considered part of bumiputera equity," said Mahathir (picture) atapress conference today after closing the Malay Economic Congress here. "Now the holdings belong to the companies concerned and they cannot be regarded as bumiputera holdings."
State oil company Petronas is also Malaysia's sole representative in the Fortune 500 list of the world's largest companies.
Perhaps, Tenaga Nasional is the best GLC to date for opening up its door to other players, especially to the Independent Power Producers (IPPs).
However, TM is so scared of competition. If not for the government policy to award few companies with the telco licenses, TM will be the only one monopolising the business. But even with the telcos, TM is still very much slow in its duty, especially in enhancing broadband penetration for the country, notably in Sabah and Sarawak.
Sorry to say that some people are managing the GLCs to their whim and fancy. They couldn't be bothered to take new approach in helping out Bumi companies that offer better services than them.
Even the government is being over-protective in safeguarding the interest of some GLCs to the extent that it can ask the banks not to approve financial assistance or loan to any qualified Bumi company that operatesabetter and more-advanced service than the GLCs.
Yes, it happened and is happening again. It won't be good if I reveal but some people are aware of it.
That's how benevolent we are, right?
"Kami jangkakan dua juta kenderaan ini kerana pada setiap waktu puncak dan musim-musim perayaan, jumlah kenderaan akan meningkat," katanya kepada Bernama di sini, hari ini.
I came across this excellent article in New Internationalist this evening on Pharma vs India:acase of life or death for the world's poor by Nick Harvey. It is quitealong article but well worth your time to read and to consider.
Pharma vs India:acase of life or death for the world's poor by Nick Harvey
Cases being heard in Indian courts could 'open the floodgates' for pharmaceutical companies to challenge generic drug production and keep prices ridiculously high, explains Nick Harvey.
It'saworrying time for the poor and the sick. Two cases brought to India's courts by transnational pharmaceutical companies could massively effect whether people in the Global South can access life-saving medicines. The most significant of these involves Swiss drugmaker Novartis which was refusedapatent in India for its anti-cancer drug Glivec (imatinib) and is now challenging the country's patent law.
'People are already dying because they can't get treatment and if Novartis wins things will become worse,' says Eldred Tellis, who runsacentre for drug users and people living with HIV in Mumbai. 'They are targeting India because many quality generic drugs are produced here for many people.'
Thanks to India's 1970 Patents Act, around one-fifth of the world's generic drugs – containing the same active ingredients asapatented drug but made byadifferent company atafraction of the price – are made in the country. As well supplying India's huge population, these drugs are shipped to poor countries around the world.
'We source 80 per cent of our global HIV medicines, as well as other medicines, from India – as do the Global Fund,' says Michelle Childs, Director of Policy and Advocacy at Médecins Sans Frontières (MSF). 'So what happens in India can immediately affect other countries and setaprecedent for them.'
Posted: 24 Oct 2012 07:29 AM PDT
Posted: 24 Oct 2012 05:34 AM PDT
Posted: 24 Oct 2012 04:48 AM PDT
"Sometimes... it's better foraman just to walk away. But if you can't walk away? I guess that's when it's tough." - Arthur Miller (Death ofaSalesman)
COMMENT MCA president Chua Soi Lek may think that everyone hasarole to play in this coming "war", which is the upcoming general election, but the only role the MCA is going to play is that of cannon fodder in the ultimate showdown between Umno and their arch nemesis Anwar Ibrahim. I get it. I really do. Malaysians are constantly being told to be grateful. Each community has been brainwashed into thinking they should be grateful for different reasons but above all their gratitude should be directed at Barisan National.
What is really destroying the MCA is not the propaganda of the DAP but the acceptance byalarge voting demographic of the Chinese community that no representation in the government is better than MCA representation. However, in an intellectually dishonest and morally reprehensible way, Malaysian Chinese should be grateful to the MCA. After all this group of plutocrats held up their end of the power sharing deal (getting rich in the process) but also protecting the rights of the Chinese community far better than their fellow BN comrades, the MIC.
Everyone was only out for his or her own for decades and MCA was the ever-willing enabler ofacorrupt system that paradoxically vilified and nourished the Chinese community. As an old DAP hand often tells me, "Thank god, the Chinese have made their stand instead of the old way of using the DAP asacounter balance to the MCA". This was what the recently concluded AGM was really about. The realisation behind the bluster and sabre-rattling, that the Chinese have abandoned the MCA foraparty that was not afraid to take on the Umno machine. I have argued of the futility of the MCA playing the hudud card but Wanita MCA chairperson Yu Chok Tow fears of Muslim solidarity hijacking of the federal constitution is not unfounded. Long-time watchers of Malaysian Muslim politics say much the same thing.
Umno fearingatotal loss of power may decide that the Muslim state option isaviable alternative to political annihilation. After all, there are more than enough examples of "Islamic" regimes where democratic front men carry on playing their corrupt games all the while cloaked in piety of their mullah handlers. Chua Soi Lek was right that most failed states have Islam (or hudud) asacommonality.
'Agree to disagree' position
However, he was wrong when he claimed that the DAP had managed to convince the Chinese that "hudud" would reduce crime and corruption in this country. As far as I can tell the DAP's official policy has always been that in no way does it support the implementation of hudud although PAS continues to see this as an "agree to disagree" position. The only people convinced that "hudud" is an effective tool against crime and corruption are the kool aid drinkers of Pakatan who are more than willing to commit to any position as long as it is in opposition to Umno.
Atatime whenalarge section of the voting Chinese public are eagerly embracing the rough and tumble politics of forming consensus and making allies inadiverse political alliance, all the while being mocked as being arrogant and rude; the MCA continues to embrace the sycophantic model of engagement with Umno as evidenced by the embarrassing adulation thrown Prime Minister Najib Abdul Razak's way when he graced the AGM.
Didn't the MCA public relations flacks tell Chua that donning the blue of BN further adds to the perception that the MCA is willing to sublimate Chinese identity to the dictates of Umno? This brings us to another important point. Chinese identity has evolved beyond the stereotype that the MCA has always relied on. Bread and butter issues have become more sophisticated than the usual Chinese school education andalarger slice of the economic pie.
Issues such as corruption, systemic discrimination, the erosion of religious freedoms and the dysfunction of public institutions have become important issues, which cut across class lines, but more importantly acts as common ground foracertain section of the voting public looking for an alternative - any alternative - to Umno/BN. MCA by interpreting these issues as hate speech and by underestimating the "multicultural/racial" underpinnings of the opposition (even though it may merely be lip service) has painted itself intoacorner by reducing the worth of the party asacollection of infighting groups hell bent on reclaiming populist Chinese support when the community's definition of "populist" has changed.
A good example of this is the anti-hudud posturing of the MCA does not translate toapro-Christian stance. Whereas Pakatan hasapro-religion - as in every religion is vigorously "defended" - dialectic going on, MCA has to continue to play the appeasement game with the hard liners in Umno at the expense ofavaluable new awakened Christian voting bloc. Whereas the DAP has been actively seeking the Christian vote and in the process reminding them of their constitutional rights, the MCA has been chastising these efforts as another example of the DAP disrupting the Umno peace with "hate". Did the MCA forget that in this changed political climate the Chinese vote and Christian vote is not necessarily mutually exclusive?
Delegate Tiew Geok Siew unintentionally lets the cat out of the bag when she claimed that the "poorly educated" join the DAP. As I said, the MCA has always beenaparty of plutocrats who remained relevant as long as the Chinese community was willing to scramble over each other to gain the favours of the party's warlords.
This was notapolitical party as such but ratherabusiness club where members learnt the finer points of crony capitalism. In addition, to say nothing of the fact that political parties think that "education" isanecessary tool for indoctrination of students to prostrate themselves before their political betters. The class tensions within the Chinese community which were never addressed by anyone except the DAP have proved to beaboon for the opposition party. While post-2008 tsunami, the MCA has been struggling to find relevance, the DAP together with her partners have managed to turn racial issues into populist class issues. This is why the MCA and other BN component parties have been vilified as "racists" merely because they doggedly stick to the original "power sharing formula" game plan.
If you areamainstream political party and you are no threat to Umno, then the conventional thinking goes, you are no use to anyone. This is the most important lesson of "change" that the MCA has failed to learn. Malaysiakini
Posted: 24 Oct 2012 04:17 AM PDT
Source-Forbes: Socialism or Free Markets? Consider Myanmar and Thailand This story appears in the November 5, 2012 issue of Forbes.
မြန်မာနဲ့ထိုင်း နိုင်းယဉ်ကြည့်တဲ့အခါဝယ် ( လီကွမ်ယု ) by ဦး ဦး
မြန်မာနှင့်ထိုင်းဟာ နယ်မြေ အကျယ်အဝန်းရော လူဦးရေ စာရင်းအရပါ နီးနီးစပ်စပ် တူညီပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ( ၁၉၆၀ ) လွန်နှစ်များအထိ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိူး တိုးတက်နူန်းလဲ မတိမ်းမယိမ်းပါပဲ။( ၁၉၆၂ ) ခုနှစ် ဗိုလ်ချူပ်နေဝင်း စစ်အာဏာ သိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဆိုရှယ်လစ်အမည်ခံ စစ်အစိုးရနဲ့အတူ စီးပွားရေးဘက်မှာပါ တံခါးပိတ်ဝါဒကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်။ ပြင်ပကမ္ဘာနဲ့ အဆက်အသွယ် ဖြတ်တောက်ခဲ့ပြီး ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ အကူအညီပေးခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယနိူင်ငံနဲ့ပါ ခပ်ကင်းကင်းနေခဲ့တယ်။
( ၁၉၈၈ ) ဥိးနေဝင်း အစိုးရအဖွဲ့ နူတ်ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာ စစ်အစိုးရဟ အာဏာမှာ မြဲကျန်ခဲ့ပါတယ် ။ တစ်ချိန်တည်းလိုလိုမှာပဲ ထိုင်းဘက်မှာလဲ စစ်အာဏာသိမ်းမှူ့တွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာပြည်နဲ့ မတူတာကတော့ ထိုင်းက စစ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ခြားနားတဲ့ စီးပွားရေးစနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့တာပါပဲ။ ထိုင်းဟာ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ် ကိုဖေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံပေါင်းစုံက ရင်းနှီးမြူပ်နှံမှူ့ ပေါင်းစုံကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်အုပ်ချူပ်မှူ့ လက်အောက်ကတည်းက ရောက်ရှိနေတဲ့ တရုတ်ရွေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတွေကို အသုံးချခဲ့တယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ ထိုင်းနိူင်ငံဟာ ထုန်ကုန်အများဆုံး အာရှနိုင်ငံတွေထဲက တစ်နိူင်ငံဖြစ်နေပါပြီ။ မြန်မာနိူင်ငံရဲ့ တံခါးပိတ်ဝါဒကြောင့် တစ်ဦးခြင်းဝင်ငွေနဲ့ ပြည်တွင်း အသားတင်ထုန်ကုန်တန်ဖိုးခြင်း ( ဂျီဒီပီ )အချိူးကို နိူင်းယဉ်လျှင် ထိုင်းနိူင်ငံနောက်များစွာ နောက်ကျကျန်ခဲ့ပါတယ်။
( ၁၉၈၀ ) ခုနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက ( ၁၇၂ ) ဒေါ်လာနဲ့ ထိုင်းနိူင်ငံသားတွေက ( ၁,၀၆၀ ) ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။ ( ၂၀၁၂ ) မှာတော့ တစ်ဦးချင်းရဲ့ဂျီဒီပီ အချိူးဟာ ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ယဉ်ရင် ပိုမိုကွာဟလာပြီး မြန်မာက ( ၁၉၅၀ ) ဒေါ်လာနဲ့ ထိုင်းက ( ၈၅၁၆ ) ဒေါ်လာဖြစ်လာပါတယ်။
( ၁၉၉၇ ) ခုနှစ်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံကို လူအခွင့်အရေးချိူးဖောက်မှူ့ကြောင့် ရင်းနှီးမြူပ်နှံမှူ့နဲ့ ကုန်သွယ်မှူ့တွေကို ပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကျဆင်းမှူ့ကြောင့်ရော အခြားပြသနာတွေကြောင့်ပါ ဆေးဝါးကုန်သည်တွေဟာ ကျောက်မျက်ရတနာတွေ ဒါမှမဟုတ် တန်ဖိုးရှိတဲ့ သယံဇာတတွေကို ထိုင်းနိူင်ငံနယ်စပ်မှာ သွားရောက်ပြီး ဆေးဝါးတွေနဲ့ လဲလှယ်နေရပါတယ်။( ဒါတော့အဘိုးကြီးရွီးပြီ )
အခုချိန်မှာတော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှူ့ လက္ခဏာတွေ မြင်တွေ့နေရပါပြီ။ ဒီထဲကတစ်ခုကတော့ ယနေ့ခောတ်မြန်မာနိုင်ငံကို မွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းရဲ့ တတိယသမီး အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဝင်လာတာပါ။ သူမကို ( ၁၉၄၅ ) ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ငယ်ဘဝတော်တော်များများကို နိုင်ငံရပ်ခြားမှာကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၈မှာ နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ သူ့မရဲ့မိခင်ကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့ ပြန်လာရင်း ဒီမိုကရေစီ လူထုအုံကြွမှူ့မှာ ခေါင်းဆောင်တစ်ဥိးဖြစ်လာခဲ့ပြီး NLD ပါတီကို ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ( ၁၉၈၉ ) မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် နေအိမ် အကျယ်ချူပ်ချခံရပြီး ( ၁၉၉၀ ) ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ တစ်တိုင်းပြည်လုံးဆန္ဒမဲပေးသူ စုစုပေါင်းရဲ့( ၅၉% )နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် စစ်အစိုးရက ဒါကိုအသိအမှက် မပြုခဲ့ပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ( ၂၁ ) နှစ်အတွင်းမှာ နေအိမ်အကျယ်ချူပ် ( ၁၅ )နှစ်ကျခံခဲ့ရပြီး ( ၁၉၉၁ ) ခုနှစ်မှာ နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု ချီးမြှင့်ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် လွတ်မြောက်ခဲ့ပါပြီ။ ဒီနှစ်ဧပြီလထဲမှာ ကျင်းပတဲ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူမပါတီဟာ အမတ်နေရာ (၄၃ ) နေရာအနိူင်ရရှိခဲ့ပြီး သူမဟာလဲ လွတ်တော်အမတ်တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ သတ္တိရှိစွာ ရပ်တည်ပေးခဲ့မှုဟာ ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလဲမူ့ရဲ့ အကြောင်းတစ်ချက် ဖြစ်တယ်ဆိုရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူး။
ထို့အတူပဲ စစ်အစိုးရအတွင်း အတွေးအမြင် ပြောင်းလဲလာမူ့ကလဲ မြန်မာပြည်ပြောင်းလဲစေတဲ့ အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၁ခုနှစ် မတ်လမှာတော့ နအဖအကြီးအကဲ ဗိုလ်ချူပ်မှူးကြီးသန်းရွေ အငြိမ်းစား ယူသွားပါတယ်။ နောက်ထပ်ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်အဖြစ် ယခုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှူ့တွေရဲ့ ဥိးဆောင်သူလို့ ယူဆရတဲ့ ဥိးသိန်းစိန်ကို သူရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှူ့အောက်မှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အရပ်သားအစိုးရအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့ပါပြီ။
ဂျပန်မှာလေ့လာနေတဲ့ ဦးသိန်းစိန် ( Credit to Burma Campaign Japan )သမ္မတဥိးသိန်းစိန် ဟီလာရီကလင်တန်နဲ့တွေ့စဉ်မှာ သူမက တိုင်းပြည်ကို ရင်းနှီးမြှူပ်နှံမှူ့တွေ ကုန်သွယ်မှူ့တွေဝင်လာအောင် ဒီထက်ပိုမို တံခါးဖွင့်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
ဒီနှစ် စက်တင်ဘာလထဲမှာ သူတို့ နောက်တစ်ခါ တွေ့ကြတော့ ကလင်တန်က သွင်းကုန် ပိတ်ဆို့ထားတာတွေကို ဖြေလျှော့ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါဟာ ထိုင်းနဲ့ စီးပွားရေးကွာဟမှူ့ နည်းသွားစေမဲ့ အချက်ပါပဲ။ ထိုင်းနိုင်ငံကိုယ်၌ ကလဲ ဘုရင်စနစ်မှ စည်းမျဉ်းခံဘုရင်စနစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းမှာ လွပ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေ ပုံမှန်ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစိုးရအဖွဲ့အတွင်း မတည်မငြိမ်ရင်ဖြစ်စေ ဘုရင်ကို အတိုက်အခံလုပ်လာရင်ဖြစ်စေ စစ်အာဏာသိမ်းဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အနှစ် ၈၀ အတွင်းမှာ အောင်မြင်တဲ့ အာဏာသိမ်းမှု ၁၁ ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး မအောင်မြင်တဲ့ အာဏာသိမ်းမှုတွေကတော့ ( ၇ ) ခုပါ ။
လက်တစ်လောဖြစ်ခဲ့တာက ( ၂၀၀၆ ) စက်တင်ဘာလတုန်းက သက်ဆင်ရှင်နာဝပ်ဆီက အာဏာသိမ်းမှူ့ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တပ်ရဲ့ ဝင်ရောက်စွတ်ဖက်မှူ့တွေဟာ နိုင်ငံရေးကိုမတည်မငြိမ်ဖြစ်စေပြီး လာရောက်ရင်းနှီးမြူပ်နှံသူတွေကို အယုံအကြည်ကင်းမဲ့စေပါတယ်။ နှစ်နိုင်ငံစလုံးရဲ့ အစိုးရတွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ( ၅၀ ) က ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်သုံးတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံဟာ တံခါးပိတ်ဝါဒသုံးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံထက် တိုးတက်ကြီးပွားလာခဲ့တယ်ဆိုတာကို အမှတ်ရနေကြဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။-
သက်တော်ရှည်ဘိုးဘိုး နိုင်ငံရေးဗိသုကာ လီကွမ်ယု
Posted: 24 Oct 2012 02:39 AM PDT
Ma Chaw Suu
"ကျိုဝမ်ရယ်" နတ်မင်းကိုးပါးတော့ပြန်ကြွသွားပြီ ..
..Taoist တွေရဲ့ ပွဲဆိုပေမဲ့ တော်တော်စည်စည်ကားကားပဲ .. နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တယောက်ကအံ့သြနေတယ် .. မွတ်ဆလင်နိုင်ငံ Islamic မြို့ တော်က မဟာယန Buddhist တွေရဲ့ ပွဲက ခမ်းနားလှချည်လားတဲ့ ..ဘာသာရေးလွတ်လပ်မှု့ ဆိုတာအဲဒါပဲ .. ဘယ်သူကမှဘယ်သူ့ ကို အနှောက်အယှက်မပေးဘူး .
Chaw Suu ဒီပွဲက မလေးရှားနိုင်ငံ ထိုင်းတောင်ပိုင်းနယ်စပ်နဲ့ဆက်နေတဲ့ အစ္စလမ်မစ်ပါတီကအုပ်ချုပ်တဲ့ ကလန်တန်ပြည်နယ် ကိုတာဘာရူးမြို့က မဟာယနဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ " ကျိုဝမ်ရယ်" နတ်မင်းကိုးပါးပူဇော်ပွဲပါ..ဒီမြို့က အစ္စလာမ်မစ်ပါတီကအုပ်ချုပ်ပေမဲ့ မဟာယနကျောင်းရော ထေရ၀ါဒကျောင်းရော ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ ဘုရားတွေနဲ့ နေချင်စရာမြို့တမြို့ပါ..
တပည့်တော်ကိုယ်တိုင် အိမ်နားက ထေရ၀ါဒ၀ိပဿနာစင်တာတခုမှာ ဝေယျာဝစ္စကုသိုလ်ယူအဖွဲ့ဝင်တယောက်ပါ..တခါက တောရဘုန်းတော်ကြီး ( တကယ့်တောနက်ထဲမှာ နေပြီး တရားအားထုတ်တဲ့ တောရဘုန်းကြီး ) ၁၀ပါးကို ဆွမ်းကပ်တော့ တပည့်တော်ဈေးမှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ သစ်သီးတွေအများကြီးဝယ်ယူပါတယ် ..ရောင်းတဲ့သူကမူဆလင်ပါ..တပည့်တော်ကို မျက်မှန်းတန်းမိနေတော့ ဒီတခါအများကြီးဝယ်တာ ဘာလုပ်ဖို့လဲမေးပါတယ် ..ဘုန်းကြီး၁၀ပါးဆွမ်းကပ်ဖို့ပါဆိုတော့ ကောင်းတာလုပ်မဲ့အလှူအတွက်ဆိုပြီး ငှက်ပျောသီးဖိုးငွေမယူပဲလှူလိုက်ပါတယ်..ဘာသာရေးအခမ်းအနားတွေလုပ်ရင်လဲ ကလန်တန်ပြည်နယ် သံဃာ့နာယကနဲ့ သူတို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် တက်ရောက်ချီးမြှင့်ကြတယ် ..အကြိုက်ဆုံးအချက်ကတော့ အပြန်အလှန်လေးစားမှု့ရှိတာပဲ..တရုတ်တွေကိုဝက်သားဆိုင်ဖွင့်ခွင့်ပေးတယ်..အင်း အရက်ဘီယာတော့ လုံးဝတားမြစ်တယ်..တော်ရုံတန်ရုံဝယ်မသောက်နိုင်အောင် အခွန်အတုတ်ကို အများကြီး စည်းကြပ်ပြီး ကန့်သတ်တယ်..ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကလည်း မူဆလင်တွေမကြိုက်တဲ့စကားမပြောဘူး ..မူဆလင်တွေကလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမကြိုက်တဲ့စကားမပြောဘူး ..သောကြာနေဗလီတက်ရင်လည်း ယဉ်တွေသုံးလေးထပ်ရပ်လို့ကားတွေကြပ်တာသည်းခံတယ် ..ဗုဒ္ဓဘာသာအခမ်းအနားလုပ်ရင်လည်း ဒီလိုပဲ ..ဆိုတော့ လူတွေကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ပြီးအေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်တယ် ..
တပည့်တော်က မြန်မာပြည်ကို လုံးဝအထင်မသေးတဲ့အပြင် အထင်ကြီးချစ်ခင်လွန်းလို့ ကလေးတွေနဲ့အခြေအနေအရဒီမှာလာနေဖြစ်တာတောင် အိမ်အကူကို ဖိလစ်ပိုင် အင်ဒို ရှာငှားရတာလွယ်ကူပေမဲ့ ကလေးတွေမြန်မာစကား မြန်မာစာမတတ်မှာစိုးလို့မြန်မာလိုအမြဲပြောဖြစ်နေအောင် မြန်မာပြည်ကလူကိုပဲရအောင်ခက်ခက်ခဲခဲ ခေါ်လာတဲ့အထိပါပဲ ..တပည့်တော်အိမ်မှာလည်း အိမ်အလှဆင်ဖို့ မြန်မာပြည်ကယွန်းထည် ရွှေခြည်ထိုး သစ်သားပန်းပု စတဲ့မြန်မာဖြစ်တွေပဲသုံးပြီးအလှဆင်ပါတယ်..အိမ်ကိုရောက်တဲ့နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်ဟာ မြန်မာတွေရဲ့လက်မှု့ပညာကိုအံ့သြသွားအောင် မြန်မာတွေဘယ်လိုနေတယ်ထိုင်တယ်ဆိုတာကို မုန့်ဟင်းခါးနဲ့တမျိုး အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲနဲ့တဖုံဧည့်ခံပြီး မြန်မာပြည်ကို ပရိုမုတ် လုပ်နေကျပါ..
ဒါပေမဲ့ ခုနောက်ပိုင်း ပြောင်းလဲလာတဲ့ အချို့မြန်မာတွေရဲ့စိတ်ထားတော့မကြိုက်ပါဘူး..အမြှီးကျက်အမြှီးစား ခေါင်းကျက်ခေါင်းစားလုပ်လိုသူတွေပေါလာတယ်လို့မြင်ပါတယ် ..အရှင်ဘုရားတော့ သိချင်မှသိမယ် ..ဘာလို့ဆို လူတွေက ဘုန်းကြီးကျောင်းလာရင် ဟန်တွေလုပ်ပြီးဖုံးလာကြမှာကိုးဘုရာ့…မြန်မာပြည်မှာ အရင်တုန်းကပေါလာတာ သယံဇာတ အခုပေါလာတာ ပြဿနာ ဆိုတဲ့ကာတွန်းလေးကို မရယ်မောရက်ဘူးဘုရား ..အခုကချင် ရှမ်း ရခိုင် ဘယ်နေရာမှာမအေးချမ်းတာ အရှင်ဘုရားလဲသိမှာပါ..အစိုးရကပဲလည်လွန်းတယ်ပြောရမလား ကိုယ်တွေကပဲ အ တယ်ပြောရမလား ဒီဖော်မြူလာတွေထပ်တလဲလဲသုံးလဲ လူတွေကသဘောမပေါက်ဘူး ..ဒီသီချင်းဆိုပြီး ဒီကြိုးဆွဲရင် ဒီအကပဲ ကတဲ့ရုပ်သေးရုပ်တွေလိုပဲ ..နဲနဲပါးပါး အရှည်ကိုမျှော်တဲ့ ဥာဏ်မသုံးဘူး ..သူများက ကုလားကိုဆဲရင် လိုက်ဆဲကြတာပဲ..ဘာတွေအကျိုးအမြတ်ရမလဲ ဘာတွေဆိုးကျိုးရှိမလဲ နဲနဲမှမတွေးဘူး..သာသနာကိုကာကွယ်ရမယ်တဲ့..ဒါဆိုရင် မြန်မာပြည်ကအချို့သောဘုန်းကြီးတွေကြောင့် သာသနာတော်စောင့်နတ်မင်းကြီးလေးပါး တောင် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ် ..တပည့်တော်ကတော့ ဘုန်းကြီးတွေ ဟာ မြန်မာပြည်သားတွေကို ငယ်စဉ် ကလေးလေးဘ၀ကတည်းက ကုသိုလ် အကုသိုလ်ဆိုတာကို ခွဲခြားနိုင်အောင်သင်ပေးရမယ်..မကောင်းမှု့ကို လုပ်ဖို့ ရှက်တတ်ကြောက်တတ်အောင်သင်ပေးရမယ်..မိစ္ဆာဒိဌိအယူရှိရင် ဘယ်တော့မှ မလွတ်တော့မဲ့သံသရာကို အသည်းထဲစွဲနေအောင်သင်ပေးနိုင်ရင် သာသနာကွယ်မှာစိုးရိမ်ဖို့မလိုတော့ဘူးလို့မြင်ပါတယ်..အခုက အချို့ဘုန်းကြီးတွေက လူတွေဒါန၊ သီလ ၊ ဘာဝနာ မြဲဖို့ထက် ကုလားမုန်းဖို့ကအဓိကဖြစ်နေတယ်..
အာရပ်ပြည်မှာဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းတွေမလိုပါဘူးဘုရား ..ဗုဒ္ဓဘာသာမှမရှိပဲ ..တပည့်တော်တို့နဲ့လည်းဝေးလွန်းပါတယ် ..ဒီအာရှက မူဆလင်တိုင်းပြည်တွေမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာရှိတဲ့အရပ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ ပွဲတော် ကျင်းပခွင့်ရတာ ကိုတော့ တပည့်တော်ကျေနပ်မိတယ် ..ဟိုတလောက စမုန်ညှင်း ဆိုတဲ့အရပ်တောင်ပေါ်မှာဘုရားစေတီတည်တာ မြန်မာတွေ သိကြားဒေ၀ါအခမ်းအနားနဲ့ လုပ်တာ ပီတိဖြစ်စရာကောင်းလိုက်တာ..
အရှင်ဘုရား လုပ်နိုင်တဲ့သူက မလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေကို အထင်သေးတယ်ဆိုတာ တပည့်တော်အဖို့ကတော့ အခြားကိစ္စတွေထက် သူများနိုင်ငံမှာ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု့တွေမရှိပဲ မလေးကတရုတ်ကို အသုံးချပြီး ကြီးပွားတိုးတက်အောင်လုပ်သွားတာမျိုးမှာ မြန်မာတွေမလုပ်နိုင်တာတော့ အထင်သေးမိတယ်..အခုလည်း နောက်ပြန်ဆွဲမဲ့ လမ်းကို လိုက်နေကြတယ် ..လူတွေက ဆင်းရဲရင် တရုတ်ကို ဆဲမယ် ကုလားကို ဆဲမယ် ..တကယ်တမ်းအစိုးရကိုပဲ ဆဲသင့်တယ် ..အစိုးရမှာတာဝန်ရှိတယ်..
တပည့်တော်ကတော့ ကုလားလဲမမုန်းဘူး တရုတ်လဲမမုန်းဘူး မြန်မာလဲမမုန်းဘူး အားလုံးကအသုံးချခံတွေပဲ ..တကယ်မုန်းတာတော့ အစိုးရပဲ ..မလိမ့်တပတ် နှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်ပြီး ၂၀၁၅ အတွက် တိုင်းရင်းသားတွေ မူဆလင်တွေ ပြည်သူပြည်သားတွေကို ချနင်းနေတာ ..
ကိလေသာတွေ အတုံးလိုက်အတစ်လိုက်နဲ့ပုထုဇဉ်ဆိုတော့ လူအချင်းချင်းလှည့်ပတ်နေကြတဲ့သူတွေကို အရမ်းမုန်းတယ် ..
အဲဒါဟာဘာလို့လဲဆိုရင် မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ မြန်မာပြည်ကိုချစ်လို့ ..
အော် မြန်မာပြည်မှာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ရှိပါတယ်..တသက်လုံးရှိခဲ့တာလဲသိပါတယ် ..အမလဲလွိုင်ကော်ကမို့ ဘုရားကျောင်းတွေ ဗလီတွေရှိတာသိပါတယ် .. ပြောချင်တာကတော့ လတ်တလောကိစ္စပါ..အခုလူတွေကြားမှာ မကျေနပ်မှု့နဲ့အမုန်းပဲရှိတယ် .. ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့ ဘယ်သူတွေဘယ်လိုလက်တလုံးခြား လုပ်နေတယ်ဆိုတာ ကြည့်ရင် မြင်နိုင်ပါတယ် ..အမကတော့ မြန်မာပြည်ကို အေးချမ်းစေချင်တယ် ..တသက်လုံး ရှိနေတဲ့မူဆလင်တွေကို ခုချိန်မှဒါတွေလာပြောနေတာတော့ နဲနဲမှ မရိုးသားဘူးလို့ယူဆလို့ပါ.. မောင်လေးရေ ဘယ်သူက မှ ကိုယ်မွေးတဲ့နိုင်ငံထက် ဘယ်နိုင်ငံကို မှပိုမချစ်ဘူး ..အမဆို မြန်မာမှာတောင် ဘယ်မြို့ကြီးဘယ်လောက်စည်ပင်စည်ပင် လွိုင်ကော်လောက် မချစ်ဘူး ..
အရင်တုန်းက လမ်းထွက်ရင် လူတွေကပြုံးပြုံးရွင်ရွင်နှုတ်ဆက်ကြတယ် ခုတော့ မြန်မာဆိုတာနဲ့ မျက်နှာလွဲသွားတယ် ..အဲဒီအခါမှာ တလောကလုံးကို လိုက်မရှင်းပြနိုင်တော့ ရင်ထဲမှာနာကျင်ရတာ ကြုံဖူးတဲ့သူသိမှာပါ.. ဖဘမှာ ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြရင် ကော်မန့်တွေလိုက်ဖတ်ကြည့် ..ဗုဒ္ဓဘာသာတွေက ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလုံးမျိုးစုံသုံးပြီး ဆဲဆိုကြတယ် ..ဘယ်တယောက်ကမှ ၀င်မတားဘူး ..၀င်တားမိရင် မိန်းကလေးဆိုလဲ ပေးစားပစ်တယ် ..ယောကျာင်္းလေးဆိုလဲ ရစရာမရှိအောင်တုန့်ပြန်တယ် ..ဒါပေမဲ့ ဘာသာခြားတွေဆဲနေရင် သူတို့ဘာသာဝင်အချင်းချင်း မဆဲကြပါနဲ့ လို့သတိပေးတဲ့သူရှိရင် ဆဲနေတဲ့သူတွေရပ်သွားတယ် ..အဲဒီလူကို မင်းက ဘာမို့လား ညာမို့လား ပြန်မပြောကြဘူး ..အဲဒါလေးတွေတွေ့ရတော့လည်း မချင့်မရဲဖြစ်မိတယ် .. မူဆလင်တိုင်းပြည်မှာနေလို့ မူဆလင်တွေကို မျက်နှာလုပ်တာလဲ မဟုတ်ဘူး ..မူဆလင်တွေရဲ့ထောက်ခံချက်ရအောင် လုပ်နေတာလဲ မဟုတ်ဘူး ..အမုန်းဆိုတာ ဘယ်လိုဖြစ်ရပ်မျိုးကို မဆို ဖန်တီးနိုင်လို့ အမုန်းတွေရပ်တန့်စေချင်မိတာတခုပါပဲ..ဒါမှ လူတွေကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ပြီးအေးအေးနေနိုင်မယ်လေ ..ကောင်းတဲ့အစားအစာလေးစားရလို့ ချစ်ခင်တဲ့သူတွေလည်းစားစေချင်လိုက်တာဆိုတာမျိုးဖြစ်ဖူးမှာပါ..အဲဒီလိုပဲ ကောင်းတဲ့စနစ်နဲ့ ဖြစ်သင့်တာလေးမြင်တိုင်း အော်ငါ့နိုင်ငံမှာလည်း ဒီလိုမျိုးဆိုကောင်းမှာပဲလို့တွေးမိတာပါ..ဒါလေးကို ရေးပြီး ဒီပုံတင်ရတာကတော့ မလေးရှားဆိုရင် မူဆလင်တိုင်းပြည် ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီး မသိပဲပြောနေတဲ့သူတွေအတွက်ပါ…
Chaw Suu တော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံစုံဆွေးနွေးပေးတာ ကျေးဇူးပါ အကို Mohammed Naeem.. ဒီမနက်ပဲ ကျွန်မစာသားလေးတခုဖတ်လိုက်ရတယ် "အဆိပ်ခတ်သူရှိရင် အဆိပ်ဖြေပေးမယ့်သူလည်း ရှိတယ်" တဲ့.. မီဒီယာတွေကြောင့် အမုန်းဆိပ်သင့်လို့ ထုံထိုင်းသွားရတဲ့ အသိဥာဏ်တွေ ..ဦးနှောက်ကိုလွှမ်းမိုးလာတဲ့သံသယတွေက လူတွေကို ဒုက္ခအရမ်းပေးတယ် ..ပြသနာတွေဖြစ်စတုန်းက ကုလားတွေအကုန်သတ်ပြီး သူရဲကောင်းလုပ်မယ်လို့ကြွေးကြော်နေတာ ဒါဟာ ဗုဒ္ဓရဲ့ အလိုတော်မဟုတ်ဘူးလို့ဝင်ပြောမိတာ ..ထိုဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးကောင်းသားက တင်ထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ပုံမှ အားမနာ ကျွန်မကိုပါမက သမီးတွေကိုပါကုလားနဲ့ပေးစားပြီး ကျွန်မနဲ့ကလေးတွေဓါတ်ပုံကို သူခိုးထားတယ် အရှက်ခွဲပြမယ်ဆိုပြီး မယုံနိုင်အောင် မိုက်ရိုင်းလိုက်ကတည်းက ဘာသာရေးဆိုဘယ်တော့မှဝင်မပြောဖြစ်အောင်လက်ရှောင်ခဲ့တယ် .. နောက်တော့မှသိတာက လူတစုက အဲဒီလိုလူတွေကို ငွေပေးခိုင်းထားပြီး ၀ါဒဖြန့်စေတာ စိတ်မတို တိုစေအောင်လုပ်စေတာ ကို ချစ်မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ စေတနာနဲ့ သိခဲ့ရပြီးနောက် ကျွန်မအရမ်းသတိထားခဲ့တယ် ..အဲလို အမုန်းပိုစ့်တွေကိုရှောင်ခဲ့တယ် ..စွင့်တဲ့နားနဲ့နားထောင်ပြီး ဖွင့်ထားတဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ခဲ့တယ် .. တခါတုန်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက စိတ်ကူးယဉ်ဖူးတယ်တဲ့ ..သူ ၀ိဇ္ဖာဇော်ဂျီတွေလို တန်ခိုးတွေရအောင်ယူပြီးတော့ မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးကို ယူပေးချင်တယ်လို့ ..အခု ကျွန်မလည်း စိတ်ကူးယဉ်နေမိတယ် ..နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ရဲ့ သံသယတွေကို ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီး လူတွေရဲ့ အမုန်းတွေဖယ်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့တန်ခိုးရှင်ဖြစ်ချင်မိတာပါပဲ ..ဘင်္ဂလားကလူတွေ ရိုင်းတာ အမုန်းကြောင့်ပဲ ..အမုန်းကို အခြေခံတယ် ..အဆုံးထိလိုက်ရင် သူတို့ဒီလိုဖျက်ဆီးအောင်ပို့ဆောင်လိုက်တဲ့ တွန်းအားတွေရှိတယ် ..သူတို့လုပ်တာကို ကျေနပ်လို့ပြောတာဟုတ်ဘူးနော် ..သူတို့ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်တာလဲ ဘာတွေကသူတို့ကို တွန်းပို့တာလည်းလေ့လာကြည့်တာပါ..
လုံလောက်သောအမုန်းသာရှိပါစေ အမုန်းက ပြသနာပေါင်းများစွာကို ဖန်တီးနိုင်တယ် ..ဟစ်တလာဟာ သူခံစားခဲ့ရတဲ့အမုန်းအတွက် သတ်နိုင်ခွင့်သူ့လက်ထဲရောက်ချိန်မှာ သန်းပေါင်းများစွာသော ဂျူးတွေသေခဲရတယ် .. ကျွန်မကတော့ ကျွန်မနိုင်ငံမှာ အနိဌာရုံတွေ မမြင်လိုဘူး ..အခု မီးကိုပဲကြည့်..ရခိုင်ပဲရှို့ရှို့ ဘင်္ဂါလီပဲ ရှို့ရှို့ မီးကတော့ မျက်နှာလိုက်ပြီးလောင်မှာမဟုတ်ဘူး ..အားလုံးကို ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်မှာပဲ ..အမုန်းကလည်းမီးလိုပဲ ..အခုလူတွေဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်ကြသလဲ ..စားဝတ်နေရေးတွေအဆင်မပြေကြပါဘူးဆိုမှ ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့တိုးကြရတယ် ..နှစ်ဖက်လုံးနစ်နာတယ် ..နှစ်ဖက်လုံး ပွဲတော်ရက်တွေနဲ့ အစ်ဒ်ရယ် သီတင်းကျွတ်ရယ် အချိန်မှာ လူတွေမခံစားနိုင်အောင်ချိန်ကိုက်လုပ်တာတော့ တဆိတ်လွန်လွန်းတယ်မထင်ဘူးလားဟင်.. ကျွန်မရဲ့ အာရုံမှာတော့ ဘင်္ဂါလီရော ရခိုင်ရောကရှို့တယ်မထင်ဘူး..လုပ်ကြံမှု့လို့ပဲမြင်တယ် ..အဲဒီကလူတွေနေရာမှာ ခဏလေးဝင်နေကြည့်ရင် ဆင်းရဲဒုက္ခကတော်တော်မသေးတာတွေ့ရမယ် ..ကျွန်မတွေးတာတော့ မီဒီယာက မုန်းအောင်လုပ်နိုင်ရင် ဒီမီဒီယာကိုပဲသုံးပြီး ချစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလားပေါ့ ..ဒါကြောင့်အထင်လွဲနေတာလေးတွေပြေလည်စေချင်လို့ ၀င်ပြောမိနေတာပါ..နိုင်ငံကို မချစ်လို့လဲမဟုတ်ဘူး မလေးစားလို့လဲမဟုတ်ဘူး ..
Mohammed Naeem အဲဒီလို လွတ်လပ်မှုကို ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ကို ဝေပေးချင်လိုက်တာ အစ်မရယ်။
Chaw Suu ကျွန်မတို့ နိုင်ငံကလူတွေက တခုခုဆို ယုံလွယ်လွန်းတယ် .. စိတ်တံခါးတွေဥာဏ်တံခါးတွေဖွင့်ရတော့မဲ့အချိန်ရောက်နေပါပြီ ..ဒါပေမဲ့ ……
Andrew Sway ကြာသာပတေး၊သောကြာ ကို ရုံးပိတ်ရက်လို့သတ်မှတ်တဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံမှာ ဒီလို ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့်ပေးတာ အဲဒီကလူတွေစိတ်ထား အတွေးခေါ် ဘယ်လောက်မြင့်သလည်းဆိုတာပြလိုက်တာပါဘဲ။ ကျနော်တို့ နိင်ငံမှာလည်း စိတ်တံခါး ဥာဏ် တံခါးတွေ ပွင့်ခဲ့တဲ့ အချိန် ရှိခဲ့ပါတယ်။ စစ် အစိုးရ တက်လာပြီးမှ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ခေါင်းစဉ် နဲ့ racism ဆိုတာ ကောင်း တဲ့ အလုပ် လို့ ထင်မြင်အောင် ရိုက်သွင်းပြီး တံခါးပိတ်ခဲ့တာပါ။ အခုလည်း OIC ကို ကန့်ကွက်ကြောင်း လက်မှတ်ထိုးမှ အစ်ဒ် ပေးလုပ်မယ်လို့ အကြပ်ကိုင်လို့အစ္စလာမ် ဘာသာရေး အဖွဲ့၎ ဖွဲ့ က အခုနှစ် ၂၀၁၂ မှာ အစ်ဒ် မလုပ်တော့ဘူး လို့ ကြေညာချက်ထုတ်တာ တွေ့ လိုက်မိတယ်။
Mohammed Naeem ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့် ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလည်း နည်းနည်းရှင်းပြပါဦး။ ဗလီက ဝတ်တတ်ဖို့ ခေါ်တာကို ခွင့်ပြုတာတို့ တစ်နှစ်တစ်ခါ အီးဒ်ပွဲကျင်းပခွင့်ပေးတာတွေကို ခေါ်တာလား။
ဗလီထဲမှာ လာလေ့လာတဲ့ ဘာသာခြား ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေ နိုင်ငံတကာက ဗလီတွေမှာ နေ့စဉ် ထောင်ချီပြီးအတားအဆီးမရှိ ဝင်ထွက်နေတာ Internet ခေတ်ကြီးမှာ google လုပ်ကြည့်ယုံနဲ့ သိနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်ဘာသာမှာမျှ အပတ်စဉ်လုပ်ရတဲ့ ပွဲတွေမရှိလောက်တာ သတိပြုပြီး ဝေဖန်စေလိုပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်၊ ဟိန္ဒူ နှင့် မွတ်စလင်မ်သူငယ်ချင်းတွေ အတူတူနေလာတာ ကြာလှပါပြီ။ ချစ်စရာလည်း အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့အဲဒီ အလှအပတွေကို လက်တစ်ဆုပ်စာ လူရမ်းကား မျက်ကန်း အစွန်းရောက်တွေ ဓါးပြတိုက်နေတာကို နိုင်ငံတော်က နှာစေးပြနေတာလေး မြင်စေလိုပါတယ် ခင်ဗျား။
မလေးရှားမှာ စေတီတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေလည်း နေရာအနှံ့မှာရှိလာပါပြီ။ ဘယ်မလေးမွတ်စလင်မ်မှ အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်စရာလို စာအုပ်စာပေတွေထုတ်ပြီး မလှုံ့ဆော်သလို ဘယ်ဗလီမှာမှ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆန့်ကျင်ရေးတရား မဟောပါဘူး။ အစိုးရပိုင်းက ISA လို့ခေါ်တဲ့ ဥပဒေနဲ့ Racial harmony ကို ထိရောက်စွာ ကျင့်သုံးပါတယ်။
လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ဆိုတာ တခြားဘာသာတွေ အတွက်တော့ မပြောတော့ပါဘူး သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဖြေမယ်ဆိုဖြေကြပါစေ။
မြို့သစ်တွေမှာ ဒီနေ့အထိ စုပေါင်းဝတ်ပြုတဲ့ ဝတ်ပြုဆောင် (လွယ်လွယ်ပြောရင် ဓမ္မာရုံ) တစ်ခု မွတ်စလင်မ်တွေ ကိုယ်ပိုင်မြေမှာ စုပေါင်းဆောက်တာ အစိုးရက မပိတ်ပင်ပဲ ခွင့်ပြုခဲ့ရင် ပြောပြပေးပါ။
ပြည်၊ တောင်ငူ၊ ကမ္မ၊ ပဲခူး၊ တောင်ကြီး၊ ကျောက်ဆည် တွေမှာ သံဃာတွေ ဦးဆောင်ပြီး ဗလီတွေ အိမ်တွေ ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး အဲဒီနေရာတွေ ဒီနေ့အထိ ပိတ်ထားတာဟာ အကိုပြောနေတာနဲ့ကိုက်ညီရဲ့လား။
အခွင့်အရေးဆိုတာ ပေးရင်ယူတတ်တာ လူတွေရဲ့သဘာဝပေမဲ့ ရှေးပဝေသဏီကတည်းက ရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေ တဖြည်းဖြည်းချင်း ရုတ်သိမ်းပြနေတာကို အကိုမမြင်လို့ ဘာအခွင့်အရေးလိုချင်သေးလဲလို့မေးနေတာပါ။
အကိုပြောတဲ့အစွန်းရောက်မျိုးတွေမကြိုက်တာမျိုး ကျွန်တော်လည်း မကြိုက်ပါဘူး။ အစိုးရက ကျူးကျော်လာသူတွေ မရှိပါဘူးလို့ လူသိရှင်ကြားပြောနေတာကို ဇွတ်ကုလားမုန်းတီးရေးလုပ်ပြီး မွတ်စလင်မ် ကုလားအကုန်ကင်းစင်ရမယ်လို့ ညာသံပေးပြီး လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေသူတွေကို မျက်ကန်းအစွန်းရောက်လို့ ကျွန်တော်ပြောတာပါ။
ကရင်ပြည်နယ်မှာထုတ်တဲ့စာ (တရားဝင် ကြေငြာတာနော်) ဖတ်ကြည့်စေလိုပါတယ်။ ဦးဝီရသူရဲ့ လှုံ့ဆော်စာတွေ ဖတ်စေလိုပါတယ်။ အဲဒါဆို အကိုပြောတဲ့ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်တို့ မျက်ကန်းအစွန်းရောက်ဆိုတာတွေ နားလည်သွားမှာပါ။
ကျွန်တော်အခုနပြောသလို ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဗုဒ္ဓသာသနာ ထွန်းကားလာအောင် အကိုတို့က ဦးဆောင်ပြီးလုပ်လာလို့ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ လူသားတွေဟာ နှစ်သက် လက်ခံလာပြီဆိုရင် နေရာတိုင်းမှာ သာသနာရောင်ဝါထွန်းလာမှာပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ စေတီတည်တာ ဓမ္မာရုံဆောက်တာတွေဟာ ဘယ်သူ့ဆီမှ ခွင့်တောင်းစရာတောင် မလိုတော့ပါလို့ နားလည်ပါတယ်။
လက်ရှိ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တိုင်းပြည်မှာတောင် စေတီပုထိုးတွေမှာ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ မွေးနေ့ရှင်တွေ၊ မင်္ဂလာမောင်မယ်တွေ၊ နိုင်ငံခြားသား ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေသာ လာရောက်လေ့ရှိတဲ့ အစဉ်အလာသာ ရှိပါတော့တယ်။ ဝါတွင်းကာလမဟုတ်ရင် ဒါမှမဟုတ် ဘာသာရေးပွဲတော်တွေ မရှိရင် ဘုရားကျောင်းကန်တွေ ခမ်းခြောက်လှပါတယ်။ ဒီနေ့ လူငယ်ထုကြီး အများစုဟာ ဘာသာရေးကို လစ်လျူရှုနေတာ လက်တွေ့မြင်နေရတာကို အကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ။ ဒီလို အနေအထားမှာ အခြားနိုင်ငံတွေမှာ သာသနာပြုရေးထက် မိမိအမျိုးသားရေးက ပိုပြီးအရေးကြီးတယ်လို့ ရိုးရိုးလေး နာလည်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က သမ္မတကြီးက လက်မခံပါဘူးဆိုတာ ဘယ်သူတွေကိုလည်း ကွဲပြားစွာ နားလည်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကျူးကျော်ရန်စခိုးဝင်လာသူတွေကိုပါ။
တကယ်လို့ အခုဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေဟာ ကျူးကျော်စစ်ကြောင့်ဆိုရင် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် တိုင်းပြည်အတွက် အသက်ပေးပြီး တိုက်မှာပါ။ ဘာသာတူတိုင်း မတရားမှုမှာ အဖေပဲ ဖြစ်နေပါစေ ဘက်မလိုက်ရလို့ အစ္စလာမ်ဘာသာက တရားမျှတမှုရှိဖို့ သွန်သင်ပါတယ်။
ခက်တာက ဒီလူတွေဟာ မနေ့တစ်နေ့ကမှ ဘင်္ဂလားဒေရ်ှက ဝင်လာသလိုလို လက်နက်တွေနဲ့ ဝင်တိုက်သလိုလို မီဒီယာမှာ မရှက်မကြောက်လိမ်လည်ခဲ့တာ မှုးဇော်ဆိုတဲ့ Facebook account နှင့် eleven media အပါအဝင် အချို့ racist သတင်းဋ္ဌာနတွေပါ။ အခြေအနေဆိုးလာတာနဲ့ သူတို့ရဲ့ လိမ်ညာဇာတ်လမ်းတွေကို စာမျက်နှာတွေပေါ်က ဖျက်သွားပြီး သူတော်ကောင်းယောင် ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
အကိုက အဲဒီဒေသမှာရှိတဲ့ နှစ်ရှည်လများနေထိုင်ခဲ့သူများကို refugee status အောက်မှာနေထိုင်ပြီး စနစ်တကျ စောင့်ရှောက်တာကို သဘောကျတယ်ဆိုတာ လက်ရှိသူတို့နေထိုင်ရာ ရပ်ကွက်တွေ ဝတ်ပြုရာနေရာတွေကို မီးရှို့ ဖျက်ဆီးနေတာကို ထောက်ခံရာရောက်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အခုဖြစ်နေတဲ့ အရေးအခင်းရဲ့ နှစ်ဘက်စလုံးရဲ့ ဒုက္ခသည်တွေပါ။ ဒီအတွက် အကို့ရဲ့ အမြင်ကို ဆွေးနွေးဖော် တစ်ဦးအနေနဲ့ လက်မခံနိုင်တာ စိတ်လည်းမကောင်းပါဘူး။
အခုအချိန်မှာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ လုံခြုံရေးကို ကိုင်တွယ်ပုံဟာ အင်မတန်သိသာလှပါတယ်။ စက်တင်ဘာ ၁၈ အာဏာသိမ်းတော့ ရက်ပိုင်းအတွင်း အကုန်လုံး ငြိမ်ဝပ်လို့ ပိပြားစေခဲ့ပါတယ်။ ရွှေဝါရောင်မှာလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ခုကြမှ ဆက်တိုက်ဒါတွေဖြစ်ခွင့်ပြုထားတာ သာမာန်မဟုတ်တာ ထင်ရှားလှပါတယ်။
ကျွန်တော်တစ်ခုမေးပါရစေ။ အကိုဆွေးနွေးမှုမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အကြောင်းလား။ အခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခတွေလား။
တကယ်လို့ အကိုပြောတဲ့ လူရိုင်းတွေ အကြောင်းဆိုရင်တော့ ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရပိုင်း တာဝန်ရှိသူတွေ ဒီလိုအရေးအခင်းကို အင်အားအပြည့်သုံးပြီး ရပ်တန့်သွားအောင်ဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။ ဥပမာ Bangladesh မှာဖြစ်ခဲ့တာတို့ Assam မှာဖြစ်ခဲ့တာတို့ကိုကြည့်ပါ။ အကြမ်းဖက် ဆူပူအောင်လုပ်တဲ့သူတွေကို ဖမ်းဆီးအရေးယူ အပြစ်ပေးသလို နိုင်ငံအကြီးအကဲတွေကိုယ်တိုင် လူနည်းစု ဘာသာခြားများဘက်က ရပ်တည်ပေးပါတယ်။
အောက်က Link က Bangladesh နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးရဲ့ ဖြေရှင်းချက်ပါ။
အကိုက ဘာသာရေးကျင့်ဝတ်တွေကို သိနားလည်သူ အမြင်ကျယ်သူ တစ်ယောက်လို့ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အကို့ အနေနဲ့ သောကြာအပတ်စဉ် စုပေါင်းဝတ်ပြုကြတာကို တစ်ခါတစ်ခေါက် လာရောက် လေ့လာစေလိုပါတယ်။ အချိန်အနည်းငယ်နောက်ကျရောက်ရင် ဗလီထဲမှာနေရာမရတော့တာတွေ့ရမှာပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် RIT တက်စဉ်က အပတ်စဉ် သမိုင်းလမ်းစုံဗလီကိုလာရလို့ ဖိနပ်ချွတ်မှာသာနေရာရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ သင်ကြားမှုမှာ နေ့စဉ် ငါးကြိမ် စုပေါင်းပြီး ဝတ်ပြုဆောင်မှာ ဝတ်ပြုရတာ Compulsory ပါ။ ဒါပေမဲ့ အကိုတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ဒီလိုခိုင်းစေထားတာမရှိပဲ အခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ ရပ်ကွက်တိုင်းမှာ ဓမ္မာရုံတို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတို့ ဆောက်ခွင့်လိုချင်တာတော့ အကြောင်းရင်းကို ကျွန်တော်မတွေးတတ်ပါဘူး။ ထိုင်းနိုင်ငံလို ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားတဲ့ နိုင်ငံရဲ့ လေဆိပ်မှာတောင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ ဝတ်ပြုဖို့ prayer room ဆိုပြီးထားပေးပါတယ်။
အကိုကမြန်မာသတင်းတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်မရှိတာတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျူးကျော်လာသူမရှိကြောင်းပြောထားတာလေးကို အထောက်အထားတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒါက BNI ရဲ့သတင်းပါ။
"ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခများမှာ နိုင်ငံရေး ဦးတည်ချက်ဖြင့် သွေးထိုး လှုံ့ဆော်မှုများ ပါဝင်နေကြောင်းလည်း ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေး က ပြစ်တင် ပြောဆိုလိုက်သည်။
ဖြစ်စဉ်အချို့၏ အချိန်ကို ကြည့်ပါက တချိန်တည်း တပြိုင်တည်း ဖြစ်ခဲ့ပြီး အခြားပြင်ပမှ လူများ၏ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုနှင့် အားထုတ်မှု ရှိသည်ကို သက်သေပြနေသည်ဟု ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးက ပြောသည်။
ပဋိပက္ခအတွင်း သေဆုံးခဲ့သည့် ၇၇ ဦးတွင် ရခိုင် ၃၁ ဦးနှင့် ဘင်္ဂါလီ ၄၆ ဦး ပါဝင်ပြီး စုစုပေါင်း လူနေအိမ် ၄,၈၂၂ လုံး၊ ဗလီ ၁၇ လုံး၊ ဗုဒ္စဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ၁၄ ကျောင်းနှင့် စာသင်ကျောင်း သုံးကျောင်း မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရ သည်။
လက်ရှိ ဒုက္ခသည်များထဲတွင် ရခိုင် ၈,ဝ၃၁ ဦးနှင့် ဘင်္ဂါလီ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ ၅၃,၃၉ဝ ဦး ရှိပြီး ၎င်းတို့အတွက် အရေးပေါ်အကူအညီများ လိုအပ်လျက်ရှိသည်
ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေး" ပြောသွားတာပါ။
ကိန်းကဏန်းတွေက လက်ရှိဖြစ်ရပ်ကို အကုန်မဟုတ်တောင် တစ်စိတ် တစ်ပိုင်း ထင်ဟပ်စေပါတယ်။
အောက်က Link က ဦးခင်ရီရဲ့ ရှင်းလင်းချက်ပါ။
ကျူးကျော်ရန်စလာသူ (Intruders) နှင့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ (Migrants) ကွဲပြားစွာ နားလည်ဖို့လိုပါတယ်။
ဘာသာရေးစော်ကားတဲ့သူကို ကျွန်တော့် post မှာ comment လည်းပေးခွင့်မပြုသလို ကိုယ့်ကိုဆဲလာခဲ့ရင်လည်း လစ်လျူရှုပါတယ်။ မှန်ပါတယ်။ ဒါ individual case ပါ။ သို့သော် အုပ်စုတစ်ခု ဂိုဏ်းတစ်ခုက တစ်စိုက်မတ်မတ်လုပ်လာခဲ့ရင် ဒါဟာဝါဒဖြန့် လှုံ့ဆော်တာဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
ဒီခေတ်ကြီးမှာ လူမျိုးရေးတို့ ဘာသာရေးတို့ အစွန်းရောက်ကြတာ ပညာမဲ့လို့သော်လည်းကောင်း၊ အမြတ်ထုတ်လိုတဲ့အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ ဖိနှိပ်ညှင်းပန်းလိုတဲ့အတွက်သော်လည်းကောင်း စသဖြင့် အခြေအနေ အမျိုးမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။
မက္ကစီကိုက ခိုးဝင်သူတွေကို သတ်နေတဲ့ အမေရိကန် သာမာန်ပြည်သူမရှိသလို
မလေးရှားကို ခိုးဝင်နေတဲ့ မြန်မာတွေကိုလည်း ဘယ်သာမာန် မလေးပြည်သူတွေ မှ သတ်မနေပါဘူး။
ခိုးဝင်လာပြီး ကျူးကျော်စစ်ဆင်နွဲနေတာလည်း ခုထိ ဘာမျှ သေချာတဲ့ အထောက်အထားမရှိသေးဘူး။
အဲဒီလို နိုင်ငံတော်က နှာစေးပြနေတာတွေ၊
မျက်ဖြူစိုက်လေ ဆရာကြိုက်လေ ပုံစံမျိုး တိုးလို့သာ ဝါဒဖြန့်ခွင့်ပြုနေတာတွေဟာ ဘယ်လိုမျှ ငြင်းမရတဲ့ လက်လျှိုမှုတွေပါ။
ဘာမျှမဆိုင်ပဲ ကရင်ပြည်နယ်မှာ မွတ်စလင်မ် ဆန့်ကျင်ရေး လှုံ့ဆော်စာတွေထွက်တာ အစိုးရပိုင်းက မသိမရှိလောက်ပါဘူး။
အကို့လိုပဲ ကျွန်တော်လည်း အရင်လို ပြန်လည် အေးချမ်းလာမဲ့ နေ့လေးတွေကို မျှော်နေမိပါတယ်။
Posted: 24 Oct 2012 03:04 AM PDT
Derma politik" kontroversial RM40 juta kepada Umno Sabah melibatkan Ketua Menteri Datuk Musa Aman telah dimasukkan ke dalam akaun bank peribadi "seorang pemimpin Umno", dakwa bekas ahli parlimen (MP) Barisan Nasional (BN).
Datuk Seri Wilfred Mojilip Bumburing (gambar) yang kini merupakan MP bebas Tuaran, mengatakan dalam kenyataan melalui email malam tadi ahli keluarga "pemimpin Umno" yang beliau tuduh boleh mengeluarkan wang dari akaun tersebut sedikit demi sedikit, menimbulkan pertanyaan tentang kenyataan pemimpin BN bahawa dana tersebut adalah untuk digunakan oleh Umno Sabah.
"Apakah pengeluaran wang ini mendapat kelulusan Umno?
"Jika wang itu bertujuan untuk didermakan kepada Umno, mengapa ianya dimasukkan ke dalam akaun bank peribadi individu?" katanya dalam kenyataan tersebut.
"Pengakuan (Abdul Rahman) juga meninggalkan banyak persoalan yang tidak terjawab seperti dari mana wang itu datang? "Adakah wang tersebut dikecualikan dari cukai atau apakah penderma membayar di atas wang yang didermakan?" soalnya.
Posted: 24 Oct 2012 12:56 AM PDT
I AGREE 100% with Veteran filmmaker Tan Sri L. Krishnan who said, "Do you know why we Indians greet each other by putting our palms together?" while demonstrating the traditional Indian gesture of greeting. "So that we do not have to wash our hands after shaking someone else's," he quipped.
We Myanmar Muslims usually give salaam likeasalute with our right palm on forehead. This is better than shake hands…
I have seen numerous patients closing their mouths and noses with their bare hands while coughing or sneezing and later give me those hands to me for hand shake.
And the worse are those male patients with problems on their private parts. They used their bare hands to point out their problems when I checked them with my gloved hands. After took-off the gloves, washed my hands and wiped only…before they left the consultation rooms, they wish to shake hands with me.
What to do? I have no choice but just to extend my hands withasmile and sweet nice greetings.
I have to wash my hands only after they left my room.
Now read the news> here in the Stars
KUALA LUMPUR: Veteran filmmaker Tan Sri L. Krishnan may bealittle hard-of-hearing and have trouble remembering some details of the past, but his nine decades have not diminished the nonagenarian's laser-sharp wit and side-splitting humour.
吉隆坡23日讯）财政部副部长拿督阿旺阿迪表示，遭国家银行查封的金玉华（Genneva）黄金买卖公司，国行不可能让该公司投资者及客户取回他们的资金。 他说，主要原因是这家公司的负债太高而资产太低，负债与资产之间的差距太大。 "你们要国行将钱退还给投资者，既然已经没有资金了，怎么还能将资金归还？" 他指出，将投资者形容为无辜的受害者，这样的形容也不正确，因为投资必须承担风险。 他今日在财政预算案委员会阶段部门总结时，回应马六甲市国会议员沈同钦的问时指出，投资者过于相信该公司提供的优厚条件。 沈同钦说，国行必须让金玉华投资者知道，他们的投资是否全部泡汤。 阿旺阿迪说，金玉华公司确实有错，但投资者也并非无辜。"当我们投资股票时，股票下跌时也需承担亏损。问题是，投资者因每月2％回酬所引诱，天下哪里会有那么良好的投资回酬？" "钱已经没有了，这些钱全部去了哪里？有的被人拿出来了，有的花在每月2％的回酬。" 国行不插手更多人受害 阿旺阿迪也反驳那些指国行的行动，才导致投资者血本无归的指责。他说，这家公司的投资者之所能获得回酬，那是因为那是属于其他投资者的钱。 他直批金玉华黄金买卖公司的"黄金回购计划"，其实就是一项"快速致富"计划。 他说，经过国行调查发现，这家公司所获得的投资非常高，但所拥有的资产却那么低，如果国行不插手，该公司最后牵连更广，让更多人受害。 阿旺阿迪表示，关于大马铁道公司的私营计划，仍处于建议阶段。他说，国行目前仍在调查，这家公司还有多少资产及负债，以便下一步行动。 "但如果要国行对投资者做出赔偿，这是非常困难的。" 他也指出，对于大马铁道公司的私营化建议，政府未做出最后的决定。
According to THIS SITE, "A January 2010 Supreme Court decision (Citizens United v. Federal Election Commission) permits corporations and unions to make political expenditures from their treasuries directly and through other organizations, as long as the spending -- often in the form of TV ads -- is done independently of any candidate.
In many cases, the activity takes place without complete or immediate disclosure about who is funding it, preventing voters from understanding who is truly behind many political messages. The spending figures cited are what the groups reported to the FEC; it does not account for all the money the groups spent, since certain kinds of ads are not required to be reported."
CLICK HERE to see statistical data about spending patterns and other vital information.
The Wall Street Journal also featured an article about who has been funding the coming elections. If only we had such statistics in Malaysia! Perhaps MPs or the EC should lobby for this.
While lawyers are top non-retired backers of President Barack Obama's campaign, the largest backers of Republican contender Mitt Romney are in the securities and investment industry. Lawyers/law firms have contributed about $22.5 million to Obama's campaign, while the securities and investment industry has donated about $18.3 million to Romney's campaign, according to recent data from the Center for Responsive Politics,anonprofit research group based in Washington. "Clearly, the financial industry thinks that Romney is one of them. He came from their world, he understands it very well, and they believe that he is going to be more sympathetic to their interests," said Viveca Novak, editorial and communications director at the Center for Responsive Politics. She added that parts ofawide variety of sectors support Obama. "He is not as clearly identified with any one sector as Romney is," Novak said.
Posted: 23 Oct 2012 11:29 PM PDT
AFP: Rohingya refugee camps or deportation
The former junta general said the "only solution" was to send the Rohingyas — which number around 800,000 in Myanmar and are considered to be some of the world's most persecuted minorities — to refugee camps run by UNHCR.
Posted: 24 Oct 2012 12:26 AM PDT
Tiada lain yang dapat ku ucapkan kepada Chua Soi Lek selain 'selamat jalan', tatkala seluruh negara melihat betapa gigihnya MCA menggali kubur sendiri sewaktu persidangannya hujung minggu lalu. Sambil mengelap air mata meratapi pemergian parti Cina terbesar di Malaysia, kita turut menitipkan belasungkawa buat United Malays National Organisation yang kian sunyi menyendiri di dalam sebuah barisan politik yang sedang nazak.
DAP, sebagai sebuah parti yang tidak berasaskan kaum mahupun mengangkat nama mana-mana agama; hanya sekadar melihat dengan ekspresi tidak percaya pada politik 'lagak ngeri' yang diperlihatkan MCA dua tiga hari lalu. Tidak menyangka parti Cina tersebut mampu memberanikan diri untuk menyerang dan menghina Islam dan hudud secara terang nyata.
Malaysiakini memetik Heng sebagai berkata, "Daripada ucapan Nik Aziz, kami simpulkan bahawa Nik Aziz secara terbuka meminta orang Islam merogol bukan Islam, adakah saya benar?" Dari kejauhan kita dengar bunyi 'pap' yang amat kuat. Bunyi puluhan ribu rakyat Malaysia yang menepuk dahi dengan kenyataan tidak masuk akal ini.
Mungkin inilah sebabnya hatta NGO ultra-Melayu, Perkasa pun akhirnya keluar 'fatwa' bahawa haram bagi orang Melayu untuk mengundi MCA. Perkasa, sebagai sebuah NGO pro-UMNO pastinya rasa serba salah untuk bergulat dengan MCA, sebuah parti yang pastinya punya kuasa politik besar dalam Barisan Nasional. Lainlah kalau Perkasa sendiri sudah boleh membaca bahawa ada kemungkinan UMNO akan "fly-solo" dalam pilihanraya akan datang.
Apa maksud "fly solo"?
Posted: 23 Oct 2012 10:50 PM PDT
Posted: 23 Oct 2012 10:29 PM PDT
မင်းတို့ကို အသိတစ်ခုပေးလိုက်ချင်တာက မင်းတို့ထင်သလောက် လွယ်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပဲ..
Posted: 23 Oct 2012 08:44 PM PDT
Election '12: From Moscow to Caracas to Havana, something disturbing is happening: Dictators with long records of enmity toward the U.S. are endorsing Obama for president. What does that say about the Obama presidency? Fresh from abusing Venezuela's opposition after his own rigged re-election, Chavez declared, "If I were American, I would vote for Obama. He is my candidate." It was his second direct endorsement of Obama inaweek. After that, he spooled off his plans to impose socialism on his country.
Around the same time, Mariela Castro, daughter of Cuba's ruling communist capo Raul Castro, Fidel's brother, told CNN: "Asacitizen of the world, I would like for (Obama) to win." She added: "Obama deservesasecond chance and he needs greater support to move forward with his projects which I believe come from the heart."
There was more of that appreciation of Obama's heartwarmingness from Russia's stoat-faced autocrat Vladimir Putin: "Obama isagenuine person who really wants to change much for the better," he said, in what The Moscow Times said was "widely viewed as his most direct endorsement of Obama." That has since been followed by more of the same from that bastion of dictatorships in club form — the United Nations. Monday, the U.N.'s special rapporteur on counter-terrorism and human rights warned Americans thatavote for Mitt Romney was "a vote for torture," an indirect endorsement of Obama — or else.
There've been other indirect endorsements, too. Earlier this year, The Gulf Times,anewspaper closely aligned with the autocratic rulers of Dubai, endorsed Obama, significant because the United Arab Emirates, of which Dubai is part, was found to be financing "Promised Land,"aHollywood film starring Matt Damon with the mission to discourage fracking in the U.S., which would lessen U.S. consumption of Gulf oil. And there have been de facto endorsements based on acts — from the evidence of Chinese cash coming into Obama's campaign coffers through the China-domiciled Web site Obama.com — to the sudden declaration by Iran's mullahs last weekend of "peace talks" soon to be held, but only if Americans vote for Obama.
One or two silly endorsements from movie stars or Honey Boo Boo are one thing. But with this president, there'sasustained and disturbing pattern of America's enemies signaling preference for Obama over the alternative as U.S. president. In the case of Chavez and the Castro oligarchs, it's obvious enough that Obama governs inaway that resembles their own — increasing state employees and state dependency, ruling by decree, singling out companies for punishment, and engaging inacult of personality where the state is replaced by the leader. Investor
Posted: 23 Oct 2012 08:31 PM PDT
အကြောင်းပြုလို့ ဖြစ်ခဲ့ ဖြစ်ဆဲ
နိုင်ငံသားပဲ မဟုတ်သလို ဆက်ဆံပြလို့ သံသယတွေပွားရတယ်။